နေ့စဉ် အမျိုးသမီးများ၏ရင်သားကို ၁၀ မိနစ် ကြည့်လျှင် အမျိုးသားများ သက်တမ်း ပိုရှည်စေနိုင် ( အသက်ပြည့်ရင် အခုပဲ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါသည်) - Apannpyay
Home > Uncategorized > ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ > နေ့စဉ် အမျိုးသမီးများ၏ရင်သားကို ၁၀ မိနစ် ကြည့်လျှင် အမျိုးသားများ သက်တမ်း ပိုရှည်စေနိုင် ( အသက်ပြည့်ရင် အခုပဲ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါသည်)
နေ့စဉ် အမျိုးသမီးများ၏ရင်သားကို ၁၀ မိနစ် ကြည့်လျှင် အမျိုးသားများ သက်တမ်း ပိုရှည်စေနိုင် ( အသက်ပြည့်ရင် အခုပဲ ၀င်ကြည့်နိုင်ပါသည်)
March 13, 2018 March 14, 2018 Apann Pyay
နေ့စဉ်အမျိုးသမီးများ၏ရင်သားကို ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြည့်ခြင်းသည် အမျိုးသားများ၏သက်တမ်းကို၅နှစ်ပိုရှည်စေနိုင် …! ( အမျိုးသမီးများ မဖတ်ရ )
်နေ့စဉ်အမျိုးသမီးများ၏ရင်သားကိုဆယ်မိနစ်ခန့်ကြည့်ခြင်းသည်အမျိုးသားများ၏သက်တမ်းကို၅နှစ်ပိုရှည်စေနိုင်တယ်လို့ ဂျာမန်သုတေသီများ၏ NewEngland Journal of Medicine တွင်တင်ပြချက်အရ အမျိုးသမီးများ၏ရင်သားများကိုအမျိုးသားများနေ့ စဉ်စိုက်ကြည့်ပေးပါက အသက်ရှည်စေကြောင်းသိရသည်။
၁၀ မိနစ်စိုက်ကြည့်ပါက အားကစားရုံတွင် မိနစ်၃၀ ခန့်အားကစားလုပ်ခြင်းနှင့်ညြီေ ကာင်း ဒေါက်တာ KarenWeatherbyကပြောကြားခဲ့သည်။ဤသို့ပေါက်ပေါ က်ရှာရှာ စူးစမ်းမှုကို အသင်းဖွဲ့၍ဒေါက်တာKaren Weatherby ကဦးဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့ အဖွဲ့သည်ဂျာမနီနိုင်ငံဖရန့်ဖတ်မြို့ ရှိ အမျိုးသား၂၀၀နှင့်သုတေသနပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၄င်းတို့အထဲမှ တစ်ဝက်ကိုနေ့စဉ်ကြည့်ခိုင်းပြီးတစ်ဝက်ကိုသေချာရှောင်ကြဉ်ခိုင်းထားပြီးလေ့လာခဲ့ကြသည်။ငါးနှစ်ြ ကာသောအခါနေ့စဉ်သေချာစိုက်ကြည့်ခဲ့သော အမျိုးသားများသည်မကြည့်သူများထက်သိသာခြားနားစွာ သွေးဖိအားအတက်အကျရောဂါကင်းဝေးခြင်း၊သွေးခုန်နှုန်းမှန်ကန်ခြင်းနှင့် လေဖြတ်ခြင်း၊နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါအန္တရာယ်များနည်းပါးသွားကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
“ဒီလိုလိင်နဲ့ဆိုင်တဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဟာ နှလုံးကိုသွေးညှစ်ပေးမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပြီးသွေးလှည့်ပတ်မှုကိုပါကောင်းစေတာ သံသယရှိစရာမရှိပါဘူး၊သေချာပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကကြည့်တာချင်းတူတာတောင်ပိုကြီးတဲ့ရင်သားကိုကြည့်သူတွေကပိုအကျိုးထူးတာတွေ့ရပါတယ်။
အသက်၄၀ကျော်တဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရင်တော့ D-cup size နဲ့ သူ့အထက်တွေကိုကြည့်သင့်ပါတယ်”လို့ဒေါက်တာကပြောသွားပါတယ်။(သူ ပြောတဲ့ D-cupဆိုက်ကမြန်မာလို၃၆ခန့်ရှီတယ်လို့အတွေ့ကြုံမသေးသူအယ်ဒီတာကိုကိုတစ်ယောက်ကပြောသွားကြောင်းပါ) ………..ကြည့်ကြပါစို့။ ဟဲ…ဟဲ ..
နစေ့ဉျအမြိုးသမီးမြား၏ရငျသားကို ဆယျမိနဈခနျ့ကွညျ့ခွငျးသညျ အမြိုးသားမြား၏သကျတမျးကို၅နှဈပိုရှညျစနေိုငျ …! ( အမြိုးသမီးမြား မဖတျရ )
ျနစေ့ဉျအမြိုးသမီးမြား၏ရငျသားကိုဆယျမိနဈခနျ့ကွညျ့ခွငျးသညျအမြိုးသားမြား၏သကျတမျးကို၅နှဈပိုရှညျစနေိုငျတယျလို့ ဂြာမနျသုတသေီမြား၏ NewEngland Journal of Medicine တှငျတငျပွခကျြအရ အမြိုးသမီးမြား၏ရငျသားမြားကိုအမြိုးသားမြားနေ့ စဉျစိုကျကွညျ့ပေးပါက အသကျရှညျစကွေောငျးသိရသညျ။
၁၀ မိနဈစိုကျကွညျ့ပါက အားကစားရုံတှငျ မိနဈ၃၀ ခနျ့အားကစားလုပျခွငျးနှငျ့ညွီေ ကာငျး ဒေါကျတာ KarenWeatherbyကပွောကွားခဲ့သညျ။ဤသို့ပေါကျပေါ ကျရှာရှာ စူးစမျးမှုကို အသငျးဖှဲ့၍ဒေါကျတာKaren Weatherby ကဦးဆောငျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။သူတို့ အဖှဲ့သညျဂြာမနီနိုငျငံဖရနျ့ဖတျမွို့ ရှိ အမြိုးသား၂ဝဝနှငျ့သုတသေနပွုခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။
၄ငျးတို့အထဲမှ တဈဝကျကိုနစေ့ဉျကွညျ့ခိုငျးပွီးတဈဝကျကိုသခြောရှောငျကွဉျခိုငျးထားပွီးလလေ့ာခဲ့ကွသညျ။ငါးနှဈွ ကာသောအခါနစေ့ဉျသခြောစိုကျကွညျ့ခဲ့သော အမြိုးသားမြားသညျမကွညျ့သူမြားထကျသိသာခွားနားစှာ သှေးဖိအားအတကျအကရြောဂါကငျးဝေးခွငျး၊သှေးခုနျနှုနျးမှနျကနျခွငျးနှငျ့ လဖွေတျခွငျး၊နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါအန်တရာယျမြားနညျးပါးသှားကွောငျးအတညျပွုနိုငျခဲ့သညျ။
“ဒီလိုလိငျနဲ့ဆိုငျတဲ့စိတျလှုပျရှားမှုဟာ နှလုံးကိုသှေးညှဈပေးမှုတိုးတကျကောငျးမှနျစပွေီးသှေးလှညျ့ပတျမှုကိုပါကောငျးစတော သံသယရှိစရာမရှိပါဘူး၊သခြောပါတယျ။နောကျတဈခကျြကကွညျ့တာခငျြးတူတာတောငျပိုကွီးတဲ့ရငျသားကိုကွညျ့သူတှကေပိုအကြိုးထူးတာတှရေ့ပါတယျ။
အသကျ၎ဝကြျောတဲ့အမြိုးသားတှဆေိုရငျတော့ D-cup size နဲ့ သူ့အထကျတှကေိုကွညျ့သငျ့ပါတယျ”လို့ဒေါကျတာကပွောသှားပါတယျ။(သူ ပွောတဲ့ D-cupဆိုကျကမွနျမာလို၃၆ခနျ့ရှီတယျလို့အတှကွေုံ့မသေးသူအယျဒီတာကိုကိုတဈယောကျကပွောသှားကွောငျးပါ) ………..ကွညျ့ကွပါစို့။ ဟဲ…ဟဲ ..
ဗိုလ်ချုပ် နဲ့ ဦးစော..။ (နောင်လာနောက်သားများအတွက် စိတ်ဝင်စားစရာ ဗဟုသုတဖြစ်လို့ တင်ပြပေးခြင်းပါ။)
ဘ၀မှာ ပထမဆုံးကြားဖူးတဲ့ သတင်းတစ်ခု..။ မိသားစုသံယောစဉ် ပိုခိုင်မြဲချင်လို့ သားတွေ သမီးတွေ နဲ့…